सशस्त्र प्रहरी ब्यारेकमा कसरी फैलियो कोरोना ?
मुख्य पृष्ठसमाचार स्वास्थ्यसशस्त्र प्रहरी ब्यारेकमा कसरी फैलियो कोरोना ?
विराटनगर, १७ साउन । शनिबार इलाममा थप १७ जना सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । सशस्त्र प्रहरी वलको हेडक्वार्टर नम्बर १ गणमा कार्यरत १७ जनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको हो । यसअघि सोही गणमा कार्यरत ११ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय इलामका प्रमुख वृजकुमार दासका अनुसार इलाममा संक्रमित प्रहरीको संख्या २८ पुगेको छ । ‘सुरुमा जाँच गर्दा पाँचजनामा संक्रमण देखिएको थियो ।’ उनले भने, ‘पछिल्लो पटक ४० जनाको स्याम्पल पठाउँदा १७ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आयो ।’
गणमा कसरी फैलियो कोरोना ?
सामान्यतया सुरक्षा निकायको कार्यालयमा सर्वधारणलाई प्रवेश गर्न सहज छैन । कोरोना संक्रमण फैलिएपछि कार्यालय प्रवेशमा सतर्कता अपनाइएको छ । तर सतर्कता अपनाउँदा–अपनाउँदै इलाममा एउटै गणमा कार्यरत २८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ ।
ब्यारेकमा सुरुमा पाँचजनामा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो । त्यसपछि जाँच गर्दा ६ र १७ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ देखिएको थियो ।
स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख दासका अनुसार ब्यारेकमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीमा क्वारेन्टाइनबाट कोरोना संक्रमण फैलिएको हो ।
उनका अनुसार इलाममा नेपाली सेनाका एकजना कर्मचारीमा कोरोना देखिएको थियो । संक्रमित सेनाका कर्मचारीको कन्ट्रयाक ट्रेसिङ गर्दा सशस्त्र प्रहरीका कर्मचारीमा संक्रमण देखिएको हो । ‘क्वारेन्टाइनमा खटिएका सेनाका कर्मचारीमा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कमा सशस्त्रका केही कर्मचारी रहनुभएको रहेछ, कन्ट्रयाक ट्रेसिङ गरी परीक्षण गर्दा पोजेटिभ देखियो ।’
सशस्त्र प्रहरीको टोली नाकाको सुरक्षाका लागि पनि खटिएको थियो । संक्रमणको स्रोत उत्ताबाट पनि आएको हुनसक्ने सशस्त्र प्रहरी स्रोत बताउँछ ।
प्रदेशमा सतर्कता बढाएका छौं
सशस्त्र प्रहरी वल, नेपाल नम्बर १ बराह बाहिनी मुख्यालय इटहरीका डिआईजी वंशिराज दाहाल नाकामा खटिएको सुरक्षा युनिट संक्रमणको जोखिममा रहेको बताउँछन् ।
इलाममा र झापामा सशस्त्र प्रहरीमा संक्रमण देखिएको बताउँदै उनले सुरक्षाका लागि खटिँदा आवश्यक सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइएको बताए । सीमामा आवातजावत रोक्न २८० भन्दा बढी प्रहरी युनिट परिचालित भएको बताउँदै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको कोरोना जाँच गरिने बताए ।